म हुलाकतिर लम्किइरहेकै थिएँ, पछाडि महिलाकोच्याँट्ठिएको स्वर सुनियो, ‘एक्सक्युज मी, तिमीले यो के गरेको ? कुकुरको आची बाटोमा छोड्न लाज लाग्दैन ?’
कारबाट एउटी गोरी कराइरहेकी रहिछ । कुकुर समातेर सडकपेटीमा उभिइरहेकी अर्की महिला अँध्यारो मुख लगाएर बोली, ‘अझै गर्छ कि भनेर पर्खेको । यो फोहोर मफालिहाल्छु नि !’
कारमा सुइँकेर आउने त्यो गोरीले जसरीकुकुरवालीलाई झपारी, हाम्रोमा त्यसरी सही कुरोसही समयमा उठाउने हिम्मत कसैमा छ ? मआफैंमा छ ? अहँ, छैन ।